(၄၅) နှစ် - Pied & outlandish fetish porn: ငါကုသခံရပုံရသည် - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
(၄၅) နှစ် - Pied & outlandish fetish porn: ငါကုသခံရပုံရသည်
ကျွန်ုပ်အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိကျောင်းတွင်ကတိသစ္စာပြုထားသော်လည်း PMO တွင်စွဲလမ်းနေသည်။ မြန်ဆန်သောအင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာသည်အထိမဂ္ဂဇင်းများနှင့် VHS ဗီဒီယိုများစွာပါ ၀ င်သည်။
ငါလက်ထပ်ပြီးနှစ်ကြိမ်၊ မိန်းကလေးမိန်းကလေးများနှင့်မကြာသေးမီကအထိ PIED ခံစားခဲ့ရသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွားငါကမ္ဘာ၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိင်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်၊ လိင်ကောင်းတယ်၊ မဟုတ်ဘူး၊ ကြီးမြတ်တဲ့လိင်ဖြစ်ပေမယ့်ငါပိုပိုပြီးလိင်ချင်တဲ့စွဲလမ်းသူ၊ သူမသည်အသစ်သောအရာများ၊ ကွဲပြားခြားနားသောအရာများစွာအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော်လည်းသူမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့သွားသောအခါသို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုညတွင်သူမကိုကျွန်ုပ်မသွားလိုကြောင်းနှင့် PMO သို့ပြန်လာရန်ကျွန်ုပ် PMO လိုအပ်ကြောင်းခံစားခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အလေ့အထက fetish porn, edging and femdom အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။ ငါ "Lisa" ငါ့လိင်ဘဝတဟုန်ထိုးနေသောကြောင့်အမှုအရာပိုမိုဆိုးရွားလာထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဇနီးဟောင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှသည်များစွာသောလိင်ဆက်ဆံမှုသို့သွားခဲ့သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်အဲဒါကအရက်ယမကာစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာအရက်သောက်တာနဲ့တူတယ်။ ကျွန်မရဲ့နောက်ဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဟာ ၂ နှစ်နီးပါးမရှိခဲ့ပါ။ ငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ ၃/၄ ကြိမ်။ ကျွန်ုပ်၏ဟောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌အလွန်အပြစ်ကြီးစွာကျူးလွန်ပြီးလိင်ကိစ္စကိုတားမြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမယ့်အစားသူ့ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ငါ့လက်နှင့် PMO လှည့်။
ဒီနေ့မြန်မြန်ရှေ့ဆက်ပြီးငါ့ gf မှာလိင်မှုကိစ္စကောင်းတယ်။ ငါယောက်ျားတွေအများဆုံးရှိသည်ဖို့သတ်လိမ့်မည်ဟုလိင်ဘဝကိုရှိခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်းလိင်ဆက်ဆံမှုတိုးများလာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် PMO ကို ပို၍ ပင်ဖြစ်စေလိုသည်။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုမတွေ့မချင်းငါနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ငါဟာတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်၊ တစ်ညဘယ်နေရာမှာမှငါစိုက်ထူမှုကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါကစိတ်ဖိစီးမှုခံရခြင်းအပေါ်အပြစ်တင်, မကောင်းတဲ့အချို့ကြက်သားသို့မဟုတ်အရက်သောက်စားရကြ၏။ ဒါကသီးခြားဖြစ်ရပ်လို့ထင်ခဲ့တယ် မဟုတ်ပါကထပ်မံဖြစ်ပျက်ငါ freaked!
ကျွန်တော်က ၄၅ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်၊ ငါ ED အကြောင်းကိုငါတတျနိုငျသအားလုံးသုတေသနစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဒေါက်တာကိုမြင်တော့သူကငါ့ကိုလိမ္မော်ရောင်ဆေးပြားလေးပေါ်မှာထည့်လိုက်တယ်။ ဒါကအလုပ်လုပ်ခဲ့ငါပြန်ဂိမ်းထဲမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် (စာသား) စျေးနှုန်းအလွန်မြင့်မားခဲ့သည်။ $ 45 / ဆေးလုံး !! ကျနော့်အာမခံကအကာအကွယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်တချို့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သိပ်မကောင်းပေမယ့်ဈေးချိုတဲ့သဘာဝအစားထိုးပစ္စည်းတချို့ကိုငါစမ်းခဲ့တယ်။ ငါကကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်များအတွက်ပိုမို edging ကြိုးစားခဲ့! ငါဘယ်လောက်မသိဘဲနေခဲ့တာလဲ နောက်ဆုံးတော့မင်းရဲ့ Brainonporn ကိုတွေ့ပြီးတုန်လှုပ်သွားတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ ငါ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တာတွေအားလုံးကတကယ်ကိုပိုဆိုးစေခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ငါ့ gf ကိုဝန်ခံခဲ့တယ် သူမ၏အရာအားလုံးကိုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမပြောတာကကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံသည့်နေ့များ၌ပင်ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်စွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းသူဖြစ်သည်။ ငါအရမ်းရှက်မိပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာစိတ်သက်သာရာရခဲ့တယ်။ သူမသည်အလွန်မယုံနိုင်စရာကောင်းပြီးနားလည်သောကြောင့်ငါအအေးကြက်ဆင်ကိုရပ်လိုက်သည်။ ငါ့အတွက်ညစ်ညမ်းမရှိတော့ဘူး ငါသည်လည်းငါ့လက်ကိုအရမ်းတုပခံစားခဲ့ရကတည်းကငါမဆို handjobs မပေးဖို့သူမကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ Plus အားသူမမှာအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါခက်ခဲ reboot မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့ဆေးထိုး၏အကူအညီဖြင့်ပါးစပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရသည်။ ငါဆေးတွေကိုစုံတွဲနှစ်တွဲလောက်ပဲသုံးခဲ့တယ်။ PMO မရှိတဲ့တစ်လအတွင်းမှာငါဟာစွမ်းရည်ပြည့်ဝနေပြီ။ ငါသူမကိုအချိန်တိုင်းနီးပါးထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ငါ့ PIED ပျောက်သွားပြီလို့ထင်တယ်။
ငါ PMO'ing ကိုနောက်တဖန်အစဉ်အဆက်စီစဉ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံရန်မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်သည် MO ကိုတောင်မလိုချင်သော်လည်း chaser effect ကတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်ကိုသတ်ပါသည်။ ငါတို့မနက်ခင်းမှာလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်၊ သူမထွက်သွားပြီးငါ MO ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊
ငါဆေးသောက်ပြီးမှငါ၌ဖျော်ရည်အချို့ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ကြိမ် (နှင့်ထိုနေ့သည်ပင်) နှစ်ကြိမ်သာ MO'd ကိုသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်း ၆ ပတ်ပတ်လုံး PMO နှင့် MO မပါ ၀ င်သော ၆ ပတ်ရှိကြောင်းပြောရလျှင် ၀ မ်းသာပါသည်။ ငါဆေးသောက်ပြီး ၃ ပတ်အကြာမှာမသောက်ခဲ့ဘူး၊ ငါနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာများတယ်။
ကျွန်ုပ်၏မြန်ဆန်သောပြန်လည်နာလန်ထူမှုသည်လွန်ခဲ့သောစုံတွဲတစ်တွဲသည်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်အထိပုံမှန်ရှိခဲ့သော PMO နည်းစနစ်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိ gf နှင့်တွေ့ဆုံချိန်မှစပြီးကျွန်ုပ်သည်ထူးဆန်းသော fetish porn, ballbusting, femdom နှင့် cuckhold တို့ကိုစတင်ခံစားခဲ့ရသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤအရာများကိုမခံကြနှင့်။ သင်တို့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ညစ်ညူးသောနတ်သည်သင့်ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ မတန်ဘူး။
သင့်မှာ gf သို့မဟုတ်ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက်များရှိပါကဖွင့်ပါ။ သူတို့သည်သင်၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ မင်းကကိုယ့်ကိုကိုယ်ပထမ ဦး စွာ reboot လုပ်နေပြီဆိုတာသူတို့ကိုပြောပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆုံးမှာတော့သင်ဟာပျော်ရွှင်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့တန်းတူဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းပါပဲ။ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုသည်ဆေးပြားများမရှိသောကြောင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သာလိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ကိုအသုံးပြု။ beats သေချာ, အဘယ်သူမျှမ Pun ရည်ရွယ်ပါသည်။
PS ကျွန်ုပ်နှင့် porn စွဲလမ်းနေသောရာနှင့်ချီသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမများအားဉာဏ်အလင်းပေးသည့်အတွက် NoFap နှင့်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီဆိုဒ်များမရှိရင်ငါဘာမှားနေလဲလို့တွေးနေမိမှာပဲ။ အားလုံးကံကောင်းပါစေ! သိသာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုရှိရင်ငါတင်မယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်!
LINK - အောင်မြင်မှု, ငါမျှော်လင့်ပါတယ်
နောက်ဆုံးထွက် - သွား, သွား ... သွားပြီ
ဒီတော့ဒီမှာငါ့မွမ်းမံသည် ငါမျှဝေခဲ့ကြထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ PMO မ ၇ ပတ်ခန့်ကြာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အတန်းကျောင်းမှတသက်လုံးဘဝတလျှောက်လုံးညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ ဒီအတိတ်နွေရာသီမတိုင်ခင်အထိငါဘာကိစ္စမျိုးမှမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ငါဒီဇူလိုင်လမှာဒီမိန်းကလေးနဲ့တွေ့တယ်။ သိပ်မကောင်းဘူး၊ လိင်ကိစ္စဘယ်လောက်ကောင်းလဲ၊ ညစ်ပတ်ပေရေနှင့် PMO စကတ်များအတွက်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်သူမ ၀ န်းကျင်တွင် PMO ကိုကျွန်ုပ် ပို၍ ချစ်လေလေ၊ ငါကအရူးလို့သိပေမယ့်ငါရေးရင်တောင်မှငါနှိုးလိုက်ပြီ။ အခြားမည်သူမဆိုအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သလဲ ဒါကြောင့်ငါ့ PMO ငါမကောင်းတဲ့ sh ^ t နှင့် porn fetish သို့ရအရမ်းဆိုးခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါစတင်စတင်! OMG, PIED စတင်ချိန်ကငါ့ ဦး နှောက်ကိုတကယ့်ကိုတမ်။ လအနည်းငယ်ကြာမြန်ဆန်စွာရှေ့သို့ပြေး။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဟာလေလုယ !! ငါ PMO အအေးကြက်ဆင်ထွက်ခွာခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်အကြောင်းကိုစုံတွဲတစ်တွဲစောင့်ဆိုင်းနှင့်ငါ့နံနက်သစ်သားပြန်လာ၏။ ကျွန်တော့် gf ကကျွန်တော့်ကိုခုန်ဖို့မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်ထပ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်မြန်မြန်ရှေ့သို့ပြေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည် ၄၅ နှစ်ဖြစ်သည်ဟုသင်ဘယ်တော့မှမထင်ပါ။ လိင်ကိစ္စသည်အစထက် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်လုံလုံလောက်လောက်မရနိုင်ပါ။ ယနေ့ညမှာအခြားကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုစဉ်းစားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသူမနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်မတွေ့မချင်းဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်မွမ်းမံချက်တစ်ခုကျွန်တော့်ဇာတ်လမ်းရှိတယ်။ PMO မရှိသေးဘူး၊ ငါဘယ်တော့မှပြန်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ မင်းခရီးကိုစတင်နေတဲ့မင်းတွေအတွက်ကံကောင်းပါစေ၊ ကျွန်တော့်အတွက်မလွယ်ဘူး ငါနေ့စဉ်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေရပေမယ့်ငါအိမ်မှာငါ့ကိုစောင့်ဆိုင်းဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာဆွေမျိုးမတော်စပ်ဘူးဆိုရင်တော့သင်ကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်သင်တွေ့တဲ့နောက်မိန်းမ / ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတောင်အဲဒီလိုလုပ်ပေးပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသင့်ကို ၁၀၀% အစစ်အမှန်ကိုခံထိုက်လို့ပါ။ ငါတို့နည်းတူငါတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုမည်သို့မျှော်လင့်နိုင်မည်နည်း။ ဒါကငါ့ရဲ့နှစ်ဆင့်ပါ။ ရွှင်လန်း!